Falanqeeyayaal:Al Shabaab Horumar Dhanka Warfaafinta ah Ayay Ku Tallaabsatay.
Thursday July 16, 2015 - 06:25:59 in Wararka by Super Admin
Jawaab celinno kala duwan ayay taageerayaasha jihaadka caalamiga ah ka bixiyeen isdaarkii cajiibka ah ee maalmo ka hor ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Alkataib Media ayaa maalmo ka hor soo saartay Filim Heer Sare ah
Isdaarka فشرد بهم من خلفهم 11 ayaa kamid noqday isdaaraatka ugu saameynta badan ee mu’asasada alkataaib ay kasoo saarto siraaca jihaadiga ah ee ka socda bariga qaaradda afrika gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Falanqeeyayaal arrimaha jihaadiyiinta baara saxafiyiin iyo rag mujaahidiin ah ayaa isku raacay in xafiiska warfaafinta shabaabul Mujaahidiin uu ku tallaabsaday horumar dhanka wax soo saarka maadooyinka iclaamiga ah iyo kasbashada jamhuurka muslimiinta mandiqadda geeska afrika.
Baraha bulshadu ku kulanto sida twitterka iyo facebook-ga waxaa mashquuliyay falanqeynta iyo hadal-haynta isdaarkii فشرد بهم من خلفهم 11
,arrinta xiisaha badan ayaa ah in iclaamiyiinta jihaadiga ah iyo taageerayaasha mujaahidiinta ee caalamka daafihiisa kala duwan ku nool ay mu’asasada alkataa’ib ku amaaneen qaabka filimka loosoo qaaday iyo xulashada laqdaadka muhiimka ah.
Al-kata'ib ayaa faafisay muuqaallo banaanka soo dhigaya dhiigbaxa joogtada ah ee ku socda ciidamada AMISOM.
"waa isdaar si xirfadaysan loosoo saaray si heer sare ahna loo duubay runtii waxaa ladhihi karaa xarakada jihaadiga ah ee alshabaab horumar dhanka iclaamka ah ayay ku tallaabsatay”ayuu yiri saxafi dabagala arrimaha mujaahidiinta.
shabakadda carabi21 ayaa warbixin dheer oo ay qortay ku sheegtay in isdaarka cusub ee alkataa’ib kasoo baxay uu banaanka soo dhigay kartida mujaahidiinta ka dagaalamaysa soomaaliya iyo sida ay ugu babac dhigeen awoodda kufriga caalamiga ah ee isku kaashaday ladagaalanka mujaahidiinta..
Mu’asasada alkata’ib ayaa horay usoo saartay isdaaraat dhaxagal ah oo banaanka soo dhigayay jabka shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay waxayna dhammaan isdaaraatkaasi ka caraysiiyeen cadawga iyo taageerayaasiisa halka ay ku laab qaboowsadeen malaayiin muslimiin ah.